Sideed Koox Oo Ingariis Ah Oo Warqad U Qoray Maxkamada Racfaanka Si Man City Loogu Adkeeyo Ciqaabta Champions League & Magacyada Kooxaha Oo La Shaaciyay | Laacib.net
Sideed Koox Oo Ingariis Ah Oo Warqad U Qoray Maxkamada Racfaanka Si Man City Loogu Adkeeyo Ciqaabta Champions League & Magacyada Kooxaha Oo La Shaaciyay
March 25, 2020 Balaleti Comments Off on Sideed Koox Oo Ingariis Ah Oo Warqad U Qoray Maxkamada Racfaanka Si Man City Loogu Adkeeyo Ciqaabta Champions League & Magacyada Kooxaha Oo La Shaaciyay
Liverpool, Manchester United iyo Arsenal ayaa ka mid ah sideed kooxood oo la sheegay inay warqad u qoreen maxkamada sarre ee isboortiga CAS si ay uga celiyaan Manchester City inay ka ciyaarto Champions League xilli ciyaareedka danbe.
City ayaa laga mamnuucay muddo labo sannadood ah inay ka qeyb gasho tartamada Yurub ka dib markii lagu helay inay ku xadgudbeen sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub.
Waxay beeniyeen danbiyada lagu helay iyagoo racfaan ka dhan ah ganaaxooda u gudbisay maxkamada sarre ee isboortiga CAS.
Laakiin kooxaha la xafiitama City ayaa ka baqaya in kooxda Pep Guardiola ay codsato in loo ogolaato inay ka sii qeyb qaadato tartanka Champions League inta racfaanka uu socdo iyadoo balantii dhageysiga racfaanka ay dib u dhigtay caabuqa ka dilaacay dunida ee Coronavirus.
Si ay taasi u dhicin, sideed kooxood oo ka mid ah 10ka kooxood ee ugu sareeya haatan Premier League ayaa si wadajir ah warqad ugu qoray maxkamada CAS, sida ay sheegtay jariirada Daily Mail.
Wargeyska ayaa sheegay in sideed kooxood oo ay ku jiraan Liverpool, United, Arsenal iyo Chelsea inay warqad u qoreen CAS iyagoo u marsiiyay shirkad dhanka sharciga ah.
Warqada ay gudbiyeen waxaa ku qoran in haddii City ay codsato in ciqaabtooda hakad la gelinta inta uu socdo racfaan in dhamaan sideeda kooxood ay si xoogan uga soo horjeedaan.
Si kastaba, waxaa la fahamsan yahay in kooxda heysata horyaalka Premier League aysan weli codsanin in hakad la geliyo ciqaabtooda inta racfaanka uu socdo.
Marka laga soo tago kooxda City, kooxda kale ee ka mid ah 10ka kooxood ee ugu sareeya ee aan warqada qorin waa Sheffield United. Taasoo la micno ah inay sidoo kale warqada qoreen Leicester City, Tottenham, Wolves iyo Burnley.